Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Sh/hoose ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab | HalQaran.com
Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii Sh/hoose ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab uu maanta ka dhacay degaan u dhexeeya Afgooye iyo Wanlaweyn.
Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka, iyaga oo adeegsaday qarax, kadibna jid-gal.
Wararka dhinaca amniga ayaa waxay sheegayaan inuu jiro khasaare soo gaaray askarta iyo maleeshiyada Al-Shabaab, iyo weliba gaadiidka dagaalka.
Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinacyada ku dagaalamay Shabellaha hoose, kaasi oo ku aadan Khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi.
Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe kordhiyay weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ee ku sugan deegaanno iyo Degmooyin ka tirsan Gobolka Shabellaha hoose.